Love Archives - Askstyle
သင့်ချစ်သူ သင့်လက်ကို ကိုင်တဲ့ပုံစံကနေပြောနေတဲ့ သင့်တို့စုံတွဲအကြောင်း... ချစ်သူတိုင်းက ကိုယ်ချစ်ရသူရဲ့လက်ကိုကိုင်ပုံချင်းမတူတတ်ကြပါဘူး။ တချို့ စုတ်ကိုင်ထားတတ်တယ်။ သင့်ချစ်သူ သင့်လက်ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိူးကိုင်လဲဆိုတာ ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးရွေးပေးပါ။ ဒါမှ သင့်ချစ်သူ သင့်လက်ကို ကိုင်တဲ့ပုံစံကနေ သင့်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်းကို သိနိုင်မှာပါ။ #1 လိုပုံစံ သင့်လက်ကို ကိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးက တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ယုံကြည်ကြတယ်။ လက်သန်းလေးတွေ ချိတ်ကိုင်ထားတဲ့ပုံစံက ကတိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့…Read more →
ဒီ ခံစားချက် (၁၃) ချက် ဖြစ်လာပြီဆိုရင် သူ့အပေါ်မှာသင်တကယ်ချစ်မိနေပြီသာမှတ်ပေတော့... လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်တဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက် (၁၃) ချက် (၁) မနက်မိုးလင်းလို့ မျက်စိနှစ်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သူ့မျက်နှာလေးကို အရင်ဦးဆုံး မြင်ယောင်တတ်တယ် ၊၊ (၂) ဖုန်း ringtone သံကြားတိုင်း၊ မက်ဆေ့ တစ်ခုဝင်တိုင်း သူများလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ ဖုန်းကို ကမမ်းကတမ်း ဖွင့်ကြည့်တတ်တယ်…Read more →
ကျမသဘောကျတဲ့ ကောင်လေးဆိုတာ.. ☺ ကျမလား? ကွမ်းမစားတဲ့ ကောင်လေးကို သဘောကျတယ်……… ဆေးလိပ် မသောက်တဲ့ ကောင်လေးကို သဘောကျတယ်……… နားကပ် မတပ် နားမဖောက်တဲ့ ကောင်လေးကို သဘောကျတယ်……… အမြဲတမ်း ဘီယာမသောက် အရက်မသောက်တဲ့ ကောင်လေးကို သဘောကျတယ်……… တက်တူး မထိုးတက်တဲ့ ကောင်လေးကို သဘောကျတယ်……… ရှိတာ မရှိတာ အပထားလို့ သန့်သန့်ပျံ့ပျံ့ နေတက်တဲ့…Read more →
ချစ်သူရဲ့..ထားသွားခြင်း ခံရတဲ့ အခါ ... သတိရ တယ် ဆိုပြီး ... တောင်တွေး မြောက်တွေး ကြေကွဲ မနေပါနဲ့ ... ကိုယ့်ဆီမှာ မနေချင်လို့ ပြေးထွက် သွားတဲ့ သူက ကိုယ့် အကြောင်းကို တွေးနေမှာ မဟုတ်ဘူး ... သစ္စာရှိ လှချည်ရဲ့ ဆိုပြီး ... မျှော်တော်ယောင် လုပ်မနေ ပါနဲ့…Read more →
ဒီလို လူ (၁၀) မျိုးကို တွေခဲ့ရင် တန်ဖိုးထားပါ... ( ၁ ) ကိုယ် တစ်ကယ် ချစ်တဲ့ သူကို တွေ့ ခဲ့ရင် သူနဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး လက်တွဲသွားဖို့အခွင့်အရေး ရအောင် ကြိုးစားပါ ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ " သူ ထွက်သွားတဲ့အခါ အရာအားလုံး နောက်ကျသွားပါလိမ့်မယ်…Read more →
ချစ်သူတွေကြား မလုပ်သင့်သည့်အချက်များ... 1. ဖုန်း screen မှာ ချစ်သူနဲ့ပုံကို တင်ထားပြီး တခြား အပြင်သွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ပုံကို ပြန်ပြောင်းခြင်း (အစကထဲက မတင်ချင် မတင်နဲ့ပေါ့) 2. "ချစ်လား'" လို့ ကြည်ကြည်နူးနူး မေးရင် မချစ်ပါဘူးလို့ စနောက်ခြင်း (နောက်လို့ကောင်းတဲ့ အရာမှ မဟုတ်တာ) 3. မောင်တွေမတွေ ခေါ်နေရာကနေ ရန်ဖြစ်နေတုန်းမို့ ဆိုပီး…Read more →
ဝေးကွာနေတဲ့ချစ်သူ(LDRS)တွေ တည်မြဲဖို့ ဒီအချက်တွေကို လုံးဝမမေ့သင့်ပါဘူး
ဝေးကွာနေတဲ့ချစ်သူ(LDRS)တွေ တည်မြဲဖို့ ဒီအချက်တွေကို လုံးဝမမေ့သင့်ပါဘူး 😳😳 အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ Long Distance Relationship ဘဝဟာ ချစ်သူတွေ ကြားမှာ အခက်ခဲဆုံးနဲ့ အရှည်ကြာဆုံး ကာလ အပိုင်းအခြား တွေပါ။ အဲ့လို အချိန်တွေမှာ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် နားလည်မှုနဲ့ ယုံကြည်မှု သာမရှိရင် ရေရှည် တည်မြဲဖို့ ဆိုတာ တော်တော်လေး…Read more →
သူမကိုချစ်နေမိပြီ”ဆိုတာကို ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ ဖွင့်ပြောသင့်သလဲ
သူမကိုချစ်နေမိပြီ”ဆိုတာကို ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ ဖွင့်ပြောသင့်သလဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်တော့ချစ်နေပြီး ဖွင့်မပြောရဲသေးတဲ့သူတွေအတွက် ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ ဖွင့်ပြောဖို့ အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သူမ စိတ်ကြည်နေတဲ့အချိန် မိန်းကလေးတွေအများစုရဲ့စိတ်က တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေတတ်တာပါ။ စိတ်တိုတဲ့အချိန်ဆို တိုပြီး ချက်ချင်းပဲ စိတ်ကြည်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်က ခန့်မှန်းရခက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူမရဲ့ မျက်နှာ ၊ စိတ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဖွင့်ပြောသင့်တဲ့အချိန်ဆို ဖွင့်ပြောလိုက်ပါ။ သူမဘက်က အဆင့်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန် သင့်ကို…Read more →
စိတ်ထဲဘဝင်မတွေ့မိလို့ ရန်ဖြစ်တိုင်း လမ်းခွဲမယ်မဆိုလိုက်ပါနဲ့
စိတ်ထဲဘဝင်မတွေ့မိလို့ ရန်ဖြစ်တိုင်း လမ်းခွဲမယ်မဆိုလိုက်ပါနဲ့ " လမ်းခွဲမယ် " " လမ်းခွဲမယ်" နဲ့ ထစ်ကနဲ့ရှိ စိတ်ထဲ ဘဝင်မတွေ့မိလို့ ရန်ဖစ်တိုင်း မဆိုမိပါစေနဲ့။ နှလုံးသားနဲ့ ထုံမွှမ်းထားတဲ့ တို့နှစ်ယောက် အချစ်ဇတ်လမ်းဟာ လမ်းခွဲမယ် ပြောတိုင်း ပြတ်ဆဲ ရတော့မှာလား။ ဖုန်းဆက်လို့ ဖုန်းမကိုင်မိတဲ့ အခိုက်အတန့် တဖက်သားအတွက် ခံရခက်တဲ့ စွတ်စွဲချက်တွေနဲ့ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးကို…Read more →
Single မိန်းကလေးတွေအတွက် RS အကြံပေးချက် ၇ ချက်
Single မိန်းကလေးတွေအတွက် RS အကြံပေးချက် ၇ ချက် စုံတွဲတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ single မိန်းကလေး တယောက်ဖြစ်ရတာဟာ တကယ်တော့ စိတ်ထဲ ကသိကအောက် ဖြစ်စရာကောင်းလှပါတယ်။ တခါတရံမှာ “ငါများ ကံမကောင်းလို့ ဘယ်သူမှမကြိုက်တာလား” လို့တောင် တွေးထင်မိစရာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ကြည့်လိုက်တော့လဲ ကိုယ်ဟာ အပြစ်အနာဆာလဲ မရှိ။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဒီ…Read more →
❤ ချစ်သူကို အရမ်းချစ်မိသွားရင် ဒီ (၉) ချက်ဖြစ်ပေါ်လာပါမယ် ❤
ကျွန်မသာ ညဉ့်ငှက်တစ်ကောင်ဆိုရင် ရှင်လက်ထပ်မလား…
သင်က ချစ်တဲ့သူဟာ အသင့်ကိုပေးဆပ်ချင်းအကြောင်းနားလည်စေမယ်…သင့်ကိုမုန်းတဲ့သူဟာ… သင့်ကို သည်းခံခြင်း ခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်း ခံစားစေမယ်…
နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ နှုတ်ခမ်းခြောက်တာတွေကို သဘာဝနည်းလမ်း နဲ့ ကုသမယ်
အန္တရာယ်အရမ်းကြီးတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကို မထားသင့်တဲ့ နေရာတွေ…
သားသမီးကိုလာမထိနဲ့ လို့ ပြောတဲ့မင်းမော်ကွန်း
တစ်ခြားသူတွေ သိပ်မတွေးမိသေးတဲ့ ရယ်မောဖွယ်ရာ အခက်အခဲဖြေရှင်းနည်းများ
တစ်ယောက်ချင်းစီမှာ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်တစ်စင်းစီ ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာ…